Ngaba kuyinyaniso ukuba i-SEO kunye ne-backlinks esemgangathweni ayinakuhlukaniswa?
Ewe, yinyaniso - i-SEO yonke malunga ne-backlink quality, kunye nenye. Enyanisweni, iprofayili yakho yekhonkco yewebhusayithi kufuneka ibe yiziko lakho jikelele lokucwangcisa injini. Kunjengeyiphi enye into ye-SEO, i-backlinks esemgangathweni ayinakukunika iziphumo ezikhawulezayo nezilinganiselweyo ngobusuku. Ngokuqhelekileyo, isicwangciso soqhagamshelwano sokwenziwa kwamanqaku esiqhelo senziwa ngokuqhubekayo nokuqhutyelwa ngqalelo ngokugqithiseleyo kunye nomsebenzi oqhubekayo wokugcina ukufikelela ngokuphumelelayo. Yaye unokwenza yonke imizamo yakho yokusebenza - konke okufunekayo kukulandelela inkqubo kwaye wazi zonke iiwebhusayithi ezidibeneyo. Ekuqalekeni, oko kunokubonakala kuwumsebenzi onzima.
Kodwa ungakhathazeki - vele uphume kwaye usetyenzise enye yezixhobo ezilandelayo kwi-intanethi ukugcina iliso kwiprofayili yakho ye-backlink, njengoko ndenzele kwiblogi yam. Apha bayi-Semalt Analyzer (Semalt), i-Open Site Explorer (Moz), okanye i-Rank Signals. Ngaloo ndlela, qinisekisa ukuba yonke i-backlink iyasebenza, kunye ne-text-based anchor text. Into kukuba akufanele ube neensimbi ezinjenge-generic ezifana "nqakraza kwesi sixhobo. "Kunconywa ukuba uzenzele ngakumbi, kwaye ngokuqinisekileyo ubuncinane negama eliphambili lokwenza isiphakamiso esifutshane, ukuze umsebenzisi ayazi into enokulindela.
I-SEO efanelekileyo idinga i-backlinks esemgangathweni
Ngokuqhelekileyo, iinjinjini ezinkulu zophando (ezifana ne-Google ngokwalo) ziyakwazi ukuthandwa kwazo zonke i-website, ukuhambelana, iphepha kunye nesizinda igunya elisekelwe kumgangatho wefayile ye-backlink. Yingakho i-backlink ye-organic eqinisweni phakathi kwezibonakaliso ezinamandla kunabo bonke ukuba banikwe isikhundla esiphakamileyo kwizinto zeziphumo zophando. Ndiyakubonayo ukuba, i-backlinks ibonakala iyona nto ibaluleke kakhulu, ngokubhekiselele kuhlaziyo olutsha lwangoku kwindlela yokuhlaziywa kwe-algorithm enikezwe yiGoogle. Ngenxa yoko, zonke malunga ne-backlink kufuneka ube nayo impawu kunye nobume bendalo, kungekhona nje ubungakanani bentlupheko, okanye uThixo akavumelekanga ukudibanisa.
Yintoni eyenza i-backlink esemgangathweni?
Ngokutsho kweengcali ze-SEO, i-backlinks esemgangathweni inqunywe yizinto ezimbalwa nje. Okokuqala, i-backlink esemgangathweni ihlala ivela kwiwebhsayithi echaphazelekayo enegunya lokuthembeka nokugunyazwa okuphezulu. Okwesibini, kufuneka ukuba ivelise i-web traffic kwindawo yakho okanye kwiblogi. Okulandelayo, i-backlink nganye yekhwalithi kufuneka ifakwe kwisicatshulwa se-anchor esifanelekileyo-nokuba ngumdlalo ochanekileyo wegama elingundoqo, ibinzana elingundoqo lomsila okanye ubuncinane. Ekugqibeleni, i-backlink esemgangathweni ye-SEO ayifumananga ngokukhululeka. Ngenxa yoko azinakwenzeka ukuba afumaneke kwisicatshulwa somxholo. Hlalani nikhumbule, nangona kunjalo, ukuba ulwahlulo luyisisiseko sokudibanisa impumelelo yesakhiwo. Ndiyathetha ukuba ne-portfolio ye-backlink edibeneyo eneengqungquthela ezahlukeneyo ezivela kwiindawo ezininzi ezahlukileyo kunye negunya lesigunyaziso sekhasi-liya kubonakala njengesigxina esilungileyo sokwakheka kwezinto ezivela kwiGoogle, kunye nezinye iinjongo eziphambili ze-search.
Ngelishwa, abantu bahlala bebiza ukuhlawulwa kweendawo - nje ukwenza konke okusemandleni abo ukwakha i-backlinks ngaphezulu kuzo zonke iindleko. izikhokelo eziphambili zophando. Kukho iindlela ezininzi eziqulunqwe ngokukodwa ukukhohliswa kweenjini zokukhangela. Ukuphendula kweli qiniso, i-Google ayizange yamkeleke ngokupheleleyo le mizila elandelayo yeGrey Hat efana nezikhonkco ezifihliweyo okanye iincwadi ezifihliweyo, ezihlawulelwayo, ezikhulayo "kwiifama zekhonkco," ukudibanisa iivili (iivili), njl. Ngokuqinisekileyo, ezinye zezi zicwangciso zisasetyenziswa ngabaninzi be-webmasters abangakhathali okanye abanikazi bezabelo ze-novice. Nangona kunjalo, kufuneka uhlale ungasebenzisi naziphi na izicwangciso zokuziphatha. Ngaphandle koko, kunokugqithisa xa yonke into iphela kunye newebhusayithi yonke ivinjelwe ngokupheleleyo kwiziphumo zophando - kanye kunye ngonaphakade Source .